Olan-Tokantrano : Lehilahy 70 taona maty notsatohan’ny vadiny angady
Mpivady efa mihoatra ny 60 taona no nifampikasi-tanana tany Ambohimandroso ny talata teo. Novelesin’ilay vehivavy fanoto rangahy vadiny, izay efa mananika ny 70 taona.
Nokapainy tamin’ny angady indray avy eo ny lohany. Fotoana fohy taorian’izay dia tsy nahatsiaro tena ity farany ary tsy tana intsony mihitsy ny ainy.
« Efa am-polo taona maro izay no nivady izy ireo ary tao ho ao dia nisy olana teo amin’ny tokantranon’izy ireo, araka ny famotorana natao tamin’ireo manodidina saingy ity tamin’ny talata ity no tena nampidi-doza. Tamin’io fotoana io ihany dia efa voasambotra ilay ramatoa 65 taona », hoy ny loharanom-baovao avy amin’ny zandary any an-toerana.
« Feno ratra, nampihoron-koditra mihitsy ny vatan-drangahy, indrindra fa ny lohany sy ny tanany », hoy kosa Rasolofo Andry Nirina, mponina any an-toerana.
Nametraka fitoriana avy hatrany teny anivon’ny zandary ny fianakavian’ilay rangahy lehibe.
« Tsy manaiky izahay satria ain’olona no nafoy. Raha tsy fitovian-kevitra eo amin’ny mpivady tsy tokony hiafara amin’ny famonoana olona mihitsy », hoy izy ireo.
« Manao ny famotorana izahay amin’izao fotoana izao. Efa voasambotra ilay vehivavy lehibe. Olana teo amin’ny mpivady efa ela ilay izy saingy niteraka lonilony. Tsy afaka milaza zavatra betsaka aloha hatreto fa mbola mitohy ny famotorana. Mety hisy olona hafa ho voakasika amin’ity raharaha ity », hoy ihany ny avy amin’ny zandary any an-toerana.